SWEDEN: Qoyska Aabe soomaaliyeed oo u geeriyooday cudurka corona oo eedeyn u jeediyay hay`adda caafimaadka - Calanka.com
Sheekh Abdirahmaan Sheikh Muhiadiin Eli (49-jir) oo ka mid ahaa masaaikhda waaweyn ee dalkaasi Swedan, gaar ahaan magaalada Gothenborg islamarkaana dhawaan ugu geeriyooday magaaladaasi xanuunka Coronavirus ayaa iminka waxa ay eheladiisa eedeyn u jeedinayaan hay`adaha caafimaadka dalka Swedan.
Taleefishinka SVT oo baahiyay warbixin uu ka diyaariyay qoyska Sheekh C/raxmaan, gaar ahaan xaaskiisa iyo gabar yar oo uu dhalay ayaa u sheegay in dhowr jeer oo ay la xiriireen dhakhtarka lagu wargeliyay in ay gurigooda ku sugnaadaan maadaama looga shakisan yahay aabaha in uu hayo xanuunka corona.
“- Aabahay oo dhiig mataya ayay nagu yiraahdeen gurigiina jooga oo siiya daawada qufaca”, ayay tiri gabadhiisa Halima Sheikh Muhiadiin.
Sheekha xaaskiisa oo lagu magacaabo Hiba Ismail ayaa dhankeeda sheegtay in dhakhtarku u qaatay in ay ku ciyaareysay oo aysan kasoo qaadin hadalkeeda waxba xilli caafimaadka ninkeedu uu aad u liitay.
Ehelka ayaa sheegaya in hay`adaha caafimaadku dayaceen xilli ay u baahnaayeen, waxaana xilli xaalku xumaaday maalmo kadib loo soo diray ambalaas, sidaasna isbitaalka lagu geeyay.
Nasiib darro marki isbitaalka la geeyay ayaa waxaa la ogaaday in cudurka lagu fiirsaday sheekha uu dilay kelliyaha iyo sambabka, iyadoona uu dhiig xinjirro ah ay sidoo kale fariisteen xididada dhiigga ee wadnaha.
Mar wax laga weydiiyay xaaskiisa in arrintan dayaca ah loo aaneyn karo isfaham-waa dhanka luuqadda ah ayay gaashaanka u daruurtay, waxaana ay sheegtay in ay si fiican u fahmeen balse dhagaha laga fureystay.
Gabadhiisa Halima ayaa ku boorisay hay`adaha caafimaadka in wax laga barto dhacdada aabeheed islamarkaana la rumeysto, waxna laga soo qaado dadka soo wacayay ee gar-gaarka u baahan.
Allaha u naxariisto Sheekh Cabdiraxmaan oo kasoo jeeda qoys culimo ah ayaa ahaa shakhsi si weyn looga jeclaa magaalada uu dagganaa iyo guud ahaan dalalka Skandinavianka, waxaana uu ka mid ahaa mashaa`ikhda waaweyn ee dariiqada Qaadiriyada.
Waxaa uu imaam ka ahaa masjid ku yaal xaafadda Bergsjön.
Sida ku cad warbixin caafimaad oo ku saabsan cudurka COVID-19 ayaa waxaa lagu sheegay in soomaali badan ay cudurka corona ugu geeriyootay dalka Swedan.
Trump oo ku hanjabay in uu ciidamo military u dirayo dhammaan goobaha ay dibedbaxyadu ka socdaan
ITOOBIYA: Siyaasi mucaarad ah iyo xubno kale oo xabsiga loo taxaabay
Allow u naxariiso. Waxa uu ahaa nin cilmi maadi iyo mid diini ahba lahaa oo ay dadku wada jeclaayeen. Ruux raayo ma raago.